Abukar Arman: Dawo lagu Anfariiro baa Soomaaliya u Dow ah – Radio Daljir
Abukar Arman: Dawo lagu Anfariiro baa Soomaaliya u Dow ah
Juunyo 24, 2020 6:47 g 0
Lixdan sano ayaa laga joogaa tan iyo markii dhulkii Soomaalida ee Talyaanigu haystay (Italian Somaliland) iyo kii Ingiriisku (British Somaliland) ay gumaystihii ka xoroobeen, midowgoodiina noqday mid 30 sano kabacdi faashil ah. Waqti dheer dhiig daata, burbur, iyo Soomaalinimadii oo dhuntay kabacdi labadii garab ee sharciyan loo yaqaanay Soomaaliya waxa ay mardhaweyd haddana mar kale soo afmeereen shir kale oo looga xaajoodo in mar kale la midoobo ama mar haddii la heshiin waayey la kala tago. Shirar noocaas oo dhowr ah waxaa martigalisay Turkida, dhammaan heshiisyadii Istanbul lagu wada gaarayna weli lama fulin.
Inkasta oo hadafyada shirarkaas hore ay ahaayeen kuwo abbaaraya shacabka loo sheeko-xariirinayey, haddana xaqiiqada shirkan ugu danbeeyey ee lagu sheegay dib-u-heshiisiin timaadada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu ahaa mid abbaaraya khayaano salka ku haysa juquraafiga-siyaasadeysan natiijada laga dhaxli karaana ay tahay mid khatar ku ah dadka Soomaaliyeed ee labada dhinacba.
Tan kale markaad daristid sirta shirka dul hoganeysay, amarada daqiiqadihii ugu danbeeyey la farayey madaxda sare ee labada dhinac in ay shirka soo xaadiraan, madaxda waddamada shisheeye ee shirka ka qaybgalay, iyo waliba natiijada dhalisay in la magacaabo guddiyo dib-u-heshiisiin oo labada dhinac ah waxa ay falaanqeeye kasta oo caqli leh ku dhalineysaa fikir ah shirkani waxa uu ahaa xeelad dadka lagu mashquulinayo si loo gaaro hadaf kale oo kaas ka duwan, khatarihiisana wata.
Tan iyo sannadkii 2012, labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ay magacaabeen guddiyo farsamo oo iskumid ah oo isla markiiba magacaabis kabacdi dabayshu qaaday. In ka badan dhowr jeer, waxaa si ulakac ah guddiyadii la rabay in ay heshiiyaan isla markiiba loogu soo dhextuuray heshiis-jabiyayaal. Maantana waxba kama duwana shalay.
13kii Juun, kahor inta aan waxba la shaacin, lagu shaacin warsidaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ama kan Somaliland, Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu Twitter-kiisa ku shaaciyey “berrito Jabuuti waxa aan guddoomin doonaa kulan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaas oo dabasocda iskudayadii lagu dhexdhexaadinayey labada hoggaamiye. Waxaan kale oo casumaad u fidiyey Raysal Wasaare Abiy Axmed in uu ka qaybgalo wada hadalka.” Waa majaajillo sida loo yiri ka fog. Abiy Axmed miyuu xaafadda ag marayey kahor inta aan la oran xafladda iska soo xaadiri? Waa hubaal maxaa yeelay waa uu u labisnaa hawshaas.
Je présiderai demain à Djibouti, une réunion entre le Président Mohamed Abdullahi Farmajo et le Président Moussa Bihi Abdi pour assurer le suivi des efforts de médiation entre les deux peuples frères. J'ai aussi convié le Premier Ministre Abiy Ahmed pour assister aux discussions.
Dhabtii, Abiy Axmed, Raysal Wasaaraha Itoobiya, waxa uu ahaa sarkaalka ugu muhiimsan ee ka qaybgalay kulanka. Waa dhabbaha ama dunta isku xirta saddexa istaraatajiyadood ee waaweyn ee loolamaya ee aan hore ugu soo bandhigay maqaalkaygii “Isbaddalka loo bogay lagana dabadhacay ee Geeska Afrika” oo aan laba sano kahor qoray. Midkoodna Soomaaliya uma arko saaxiib dhanka istaraatajiyadda. Mid kastaa waxa uu u arkaa mid lagu dan gaaro oo hoogaamiyayaashoodu yihiin waxmatarayaal musuq harqiyey.
Si kasta oo loo buunbuuniyo shirka Jabuuti ee Soomaaliya iyo Somaliland, sidaan hore u sheegay bugcaddaas “waa booska siyaasadeed ee ugu muhiimsan qarniga 21aad dhan juquraafiga siyaasadeysan, dhan juquraafiga dhaqaale, iyo dhanka juquraafiga diimeed.” Waa meesha biyaha istaraatajiyad ahaan ugu muhiimsan – waa Badda Hindiya iyo Badda Cas – ay ku kulmaan, waana meel meelaha ugu shidaal badan adduunka, saliid iyo gaas, ay ceegaagaan, musuq ummaddii lahayd ku baahay dartina maanta loogu diyaargaboobay sidii looga faa’iidansan lahaa.
Si aad u fahanto dhiiranaanta Madaxweyne Geelle uu ku dhiiraday in uu boor ku qariyo xaqiiqada meesha ka socota, waa in aad fahamto waa sannadguradii 20aad ee Shirkii Nabadeynta Carta ee Geelle saaxadda siyaasadda keentay, abaalkeedana wuu leeyahay. Saas oo ay tahay Geelle waxaa horyaal kacdoon iyo bulsho aan ku qanacsaneyn hoggaankiisa, kuna eedayneysa kutakrifal xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuq baahsan. Intaas kaliya ma ahee waa hoggaamiye eed ka galay dowladda Mareykanka, farna ku mudantahay in uu banjariyey siyaasaddii Mareykanka ee kadhanka ahayd Shiinaha. Geelle warmooge ma aha waana ogyahay haddii uusan garab ka helin reer Galbeedka in uusan arrimiisa gudaha xal u helin karin.
HADDA WAAD ARAGTAA, HADDANA MA ARAGTID
Ugaarsatada caalamka – oo ay ku jiraan kuwa dariska nala ahi – iyo kuwa la shaqeeyaaba ee nala nool waa ay ogyihiin sida ay u sahlantahay in hadba madaxa meel loo galiyo oo maalinba meel loogu jiheeyo kuwa qabiilka ku sarqaansan, lacagtana ku daroogeysan ee labada dhinacba.
Indhasarcaadayaasha musuqu harqiyey xaruntooduna tahay Villa Somalia waxaa ka go’an in ay xaraashaan shatiyada saliidda iyo gaaska Soomaaliya asbuuca ugu horreeya ee Agoosto 2020 ayada oo aan la helin wax hubin ah iyo dheelitir ka madaxbannaan inta danuhu isku keeneen. Haah oo Madaxweyne Farmaajo waa saxiixay Xeerka Shidaalka. Laakiin, yey ahaayeen khabiiriinta sharcigaas qoray iyo xildhibaanada khabiiriinta ah ama guddiyada madaxabannaan ee hubiyey in aan Soomaaliya laga faa’iideysan? Waxaa kale oo in la isweydiiyo mudan, todobada madaxweyne ee Soomaaliya raalli ma ka wada yihiin? Jawaabtu waa: midna iyo maya. Somaliland raalli kama aha, sidoo kale Puntland iyo Jubaland midkoodna ma oggola. Waa in dhammaantood laga helaa oggolaansho buuxa si looga hortago dagaal ka dhasha soosaarka kheyraadka.
Saas oo xaal yahay, indhasarcaadayaasha Villa Somalia waxa ay ku guulaysteen in qayb dhan oo Soomaalida kamid ah ay beentan ka dhaadhiciyaan: Waxaa la cafiyey deyntii Soomaaliya ay ku lahaayeen IMF-ta iyo World Bank oo Soomaaliya waxaa la siin doono deeq bilaash ah oo dhan USD $800 milyan. Macmacaankaas la bidhaamiyey waxaa lagu soo xerogaliyey hoggaanka Somaliland, ayada oo rajada ka danbeysaa ay tahay xoojinta dib-u-doorashada Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre ay dib-u-dooran doonaan barlamaanku. Hadde waa baarlamaan ka duwan kuwii ka horreeyey mar horena la hoosgeeyey Madaxtooyada. Waa baarlamaan aan marna la horkeenin heshiis shisheeye ama deyn la helay, marnana aan isku dayin in uu wax hubiyo ama heshiis dhacday dabagalo.
CAQLIGA SALIIMKA AH
Soomaaliya waa xuub caaro iyo shabakado tartamaya iyo kuwo la sii tartamaya, kamana marna khiyaanooyinka ugaarsatada caalamka. Si loo furfuro oo loo kala ogaado dhibkan jira ee jooga waa lagamamaarmaan in la helo waqti lagu maamulo dawo anfariir iyo amakaag leh oo cudurka Soomaaliya haya u dow ah si loo soo nooleeyo qaranimadii Soomaaliya.
Xaalka maanta dalku ku suganyahay waa dib-u-heshiisiin shisheeye garwadeen iyo qabanqaabiye ka yahay, saas bayna ahayd tan iyo sannadkii 2000. Dhammaystirka dastuurku waxa uu ku kacay in ka badan USD $60 milyan, weli waa socdaa, waxa uuna socday tan iyo sannadkii 2004. Duqeynta Mareykanku waxa ay socotay tan iyo sannadkii 2007, haddana waaba ka sii dartay oo waa asbuucle iyo duqeynta darooniska. AMISOM (ay ku jiraan Itoobiya & Kenya oo danahoodu lid isku yihiin) waxa ay Al-Shabaab la dagaalamayeen tan iyo sannadkii 2007. Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed kama dhamaadaan dib-u-dhis tan iyo sannadkii 2004, Soomaaliyana weli waxaa saaran cunaqabateynta hubka ee QM.
Intaas kaliya ma ahee, qaybinta Soomaaliya loo qaybinayo garabyo qabiileysan, garab kastana leeyahay siyaasaddiisa dibadda, difaaciisa, hay’adda socdaalka iyo saas oo kale waxa uu socday tan iyo sannadkii 1991. Garab kasta waxaa xukuma qabiilka ugu tun weyn, qabaa’ilada kalena ku amar-ku-taagleeya. Qabiil kasta waxaa lagu asaasay ama haddeerba lagu wadaa, laguna hayaa hadaf salkiisu yahay naceyb qolo kale.
Marmarka qaarkood wixii uu shakhsi dhaho waa tan ugu muhiimsan; mar kale, waa sida uu u yiraahdo; marar kale, waa meesha uu ka sheego; marna waa, waa maxay sababta uu u yiri; haddana mar kale, waa yaa yiri. Anoo intaas og, waxa aad maanta markhaati ka ahaataan in aan ku talinayo in “T” la qaato. Ma aha T-iidii argagixisada (Terrorism), ee waa tii “Trusteeship” iyo in Soomaaliya loo helo WAKIIL maamula. Aan yara dib-u-jaleeco oo idiin sharraxo afar maraxalood ee la soo maray.
Sannadkii 1992, koox yar oo Soomaali kaladuwan ka kooban ayaa waxa ay aasaaseen urur tabarruc si gacan loo siiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya soo galay, looguna helo bustayaal iyo dhar duug ah, iyo waliba dib-u-dejinta qaar kooban oo la keenay. Kooxdaas yari xiriir dhow bay wada yeesheen. Habeen habeenada kamid ah, casho kabacdi, waana markii ugu darnayd oo Soomaalidu walaal iyo waalid is laynaysay, qof baa su’aal xasaasi ah soojeediyey: Sidee uga baxnaa hooggaan iyo ba’aan?
Qof kasta waqti ku filan oo uu ka baaraandego su’aasha baa la siiyey si uu taladiisana noola qaybsado. Qof kastaana jawaab u cunanta kan maraya jidka Maka Al-Mukarama buu miiska talada soo saaray, aan ka ahayn mid sidan yiri:
Waa in aan dalbano ‘Trusteeship’ Soomaaliya WAKIIL ka noqda, si aan u helno waqti aan ku qaboowno, cabashooyinka loo maqlo, loona helo hadaf qarameed
Waa in caasimadda la badalo, xataa waqti kooban
Waa in dib loo qeexo xiddigta shan geeska ah ee calanka noqotana mid u taagan wada noolaansho meesha ay maanta tahay mid u taagan dhul dhumay oo kamid noqday dal kale amaba noqday dal madaxbannaan
Sannadkii 2004, shir sannadeedkii ISRAACA ee lagu qabtay Columbus, xubnaha shirku waxa ay si aan kalahar lahayn uga doodeen markii danbena isku raaceen qoraal siyaasadeed u doodaya in QM ay tixgeliso in Soomaaliya la galiyo ‘Trusteeship.’
Ururku markii uu carcarta lahaa – markaasna helay tixgelinta rajadii weynayd ee Soomaaliya – xubnihiisu waxa ay kor u dhaafeen 240 kana koobnaa ‘Soomaali in badan intii caqli iyo cilmi Eebbe ku manaystay.’ Qabiil iyo qowmiyad ka maqnaa ma jirin.
Ururka hawshiisa waxa ay ahayd in uu asteeyo mowduucyo muhiim u ah nabadda iyo dib-u-yagleelka Soomaalinimo iyo qaranimo. Ka doodo laba asbuuc. Kabacdina doorto guddi hawshaas diiradda saara oo ka soo saara qabyo qoraal siyaasadeed oo deedna la isku raaco lana oggolaado shir sannadeedka.
Sannadkii 2008, urur goboleedka IGAD ee Itoobiya maamulato waxa uu sharciyeeyey waxa ay ugu yeereen “Declaration of the 13th Extraordinary Session of the IGAD Assembly of Heads of states and Governments” markaasna dowladdii KMG-ka ahayd ee uu hoggaaminayey Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ay “saxiixdo qorshe u eg UN Trusteeship laakiin keenay in Soomaaliya ay magan u noqoto Itoobiya. Waa matalo lamid ah dawacadii la yiri digaaga ilaali …”
Sannadkii 2013, dhowr bilood kabacdi markii KMG-nimo dhammaatay, xafiiskii UNPOS waa la xiray, Soomaaliyana waxaa dib loogu soodhaweeyey kamid noqoshada dalalka caalamka, Xasan Shiikh Maxamuud oo markaas Madaxweyne ka ahaa DFS waxa uu ogolaaday in la dhidbo UNSOM – Xafiiska HAWLGALKA KAALMAYNTA QARAMADA MIDOOBAY EE SOOMAALIYA, si Soomaaliya loogu maamulo ‘Trusteeship’ aamusan oo aan dhammaad lahayn. Sidaas darteed sida hadda xaal yahay, DFS marnaba suurtagal uma aha in ay si madaxbannaan u go’aamiso una gudbiso siyaasad gude ama mid dibadeed ayadoon oggolaansho ka helin UNSOM oo ah meel aan xafiis Soomaaliyeed xisaabtan la geli karin, xataa isku dayi karin. Intaas kuma aysan ekaane, Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud waxa uu oggolaaday in Itoobiya ku soo biirto AMISOM.
Ogow Soomaaliya ‘Trusteeship’ laga dhegola’yahay bay waligeed ku jirtay oo maantadan dowladda Ingiriiska (UK) ayaa qalinka noo haysa, noogana wakiil ah wax kasta oo Soomaaliya la xiriira ee ka socda Golaha Ammaanka (UNSC).
Nidaamka wakiilnimada ee ‘Trusteeship’ waxa loo unkay si loo caawiyo dalalkii gumeystaha ka xoroobay si ay u helaan barasho iyo awood ay isku maamulaan. Waa nidaam bilan haddi la heli karo ‘Trustee’ ama wakiil diyaar u aha in uu ku garab-istaago, ku caawiyo iyo ‘Trustee Council’ ama guddoon kormeer iyo hubin la dabataagan shaqada wakiilka. Markii Golaha Ammaanka ee QM (UNSC) oggolaado codsiga wakiilnimada, dal Soomaaliya saaxiib la ah, hore u muujiyey in uu Soomaaliya danteeda ilaalinayo, baa la cusamayaa oo Soomaaliya markaas wakiil ka noqda 4 sano.
Haddii Soomaaliya la galiyo ‘Trusteeship’ waa ammuur xanuun badan, kalsoonida dhaawacaysa, kibirka macnadarada ah sida muraayad jabtay ka dhigaysa, laakiin ceebayntu waa tan loo baahanyahay oo waa tan kaliya ee garoonka ciyaarta caddaalad ku maamuseysa, bannaankana keenaysa isla weynida beenta ah ee qabiilka, qabiilada waaweyn oo agtooda aan waxba laga goosan karinna la simaya kuwa kale, oraneysana: maankaaga gurracan waa kan dhaliyey in Soomaaliya ay maanta ka liidato lixdan sano xorriyad kahor.
Waa sida kaliya oo si hagaagsan loogu maamusi karo cilladaha Soomaaliyeed ee is dulsaaran, gude iyo dibadba; waa sida kaliya ee loo askumi karo guddi dib-u-heshiisiin oo ka madaxbannaan siyaasadaha dowlado shisheeye iyo maalgalintoodaba. Waa sida kaliya oo si dhab ah looga wada xaajoon karo dastuur aan xuquuq qabiil oggolayn laakiin u taagan ilaalinta xuquuqda muwaandinka iyo Soomaalinimo.
Qoraalka Abukar Arman waxa uu markii hore ku qornaa afka Ingiriiska, bahda Radio Daljir ayaa tarjumay.
Abukar Arman waa qoraa, diblomaasi hore, waana bulsho-u-adeege falaanqooyinkiisa siyaasadda adduunka iyo diinta aad loo daabaco, loona daalacdo.
06/20/2020 by Abukar Arman | Twitter: Abukar Arman